प्रहरीले माछापोखरीबाट बरामद गरेको पेस्तोल गोरखाका कुशल अधिकारीको « Naya Page
प्रहरीले माछापोखरीबाट बरामद गरेको पेस्तोल गोरखाका कुशल अधिकारीको
प्रकाशित मिति : 12 September, 2019 2:39 pm
काठमाडौं, २६ भदौं । प्रहरीले काठमाडौंको माछापोखरीबाट आठ युवा पक्राउसँगै बरामद गरेको दुई थान पेस्तोल गोरखाका कुशल अधिकारीको भएको खुलासा गरेको छ ।
गत २१ भदौमा प्रहरीले दुई वटा चाइनिज पेस्तोल र त्यसमा प्रयोग हुने गोलीसहित काठमाडौंको माछापोखरीबाट ८ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ पर्नेमा नेपाली सेनाका भगौडा सिपाहीदेखि विप्लवका कार्यकर्तासम्म थिए ।
गोरखा अजिकोटका ३८ वर्षीय कुशल अधिकारी सेनाका भगौडा हुन् भने रसुवा छेदिङमोकाका २९ वर्षीय योर्साङ घले ‘गोरे’ विप्लव कार्यकर्ता रहेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । पक्राउ परेका ८ जना लुटेरा समूह हुन् । लुटेरा समूहबाट बरामद भएको पेस्तोल नेपाल प्रहरीले प्रयोग गर्ने खालका हुन् ।
पेस्तोल बाहिर लेखिएको नम्बरहरु सबै मेटिएको र प्रयोग भइरहेको अवस्थाको देखिएकाले पुलिसकै पेस्तोल हुन सक्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, बरामद २ वटै पेस्तोल गोरखाका कुशल अधिकारीको रहेको पाइएको छ । कुशलले १२ वर्षअघि एक व्यक्तिबाट पेस्तोल किनेको प्रहरीसमक्ष
बयान दिएको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतले जानकारी दिएका छन् । कुशलले को व्यक्तिबाट पेस्तोल किनेको र कहिले किनेको अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । कुशल कांग्रेस कार्यकर्ता समेत हुन् । कुशल २०७४ सालको संविधानसभाको चुनावमा कांग्रेस नेताहरुसँग चुनाव प्रचार प्रसारमा समेत सक्रिय देखिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
कुशलले बोक्दै आएको पेस्तोल ७.२ एमएम चाइनिज पेस्तोल हो । उक्त पेस्तोलको नेपाली बजार मूल्य २ लाखमाथि रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
काठमाडौं, १५ फागुन । नेपाली क्रिकेट खेलाडी एवं नेपाली क्रिकेट टीमका पूर्व कप्तान पारस खड्कालाई
प्रदेश नं. १ काे नामाकरण किरात प्रदेश नभए आन्दोलन गरौंः डा. बाबुराम भट्टराई
ललितपुर, १५ फागुन । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले
काठमाडौं, १५ फागुन । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर १० रूपैयाँ कर लगाउने भएको छ। फागुन